Naing BSell | Item - USB charger
ဖုန်းနှင့် ဆက်စပ် ပစ္စည်းများ
Samsung J6 2018 (Purple)
iPhone5s 16GB Service 210,000 Kyats|Like New
တစ်နေကုန်သုံးထားသမျှ ဖုန်း၊ Power Bank၊ ကင်မရာ၊ ဓါတ်မီး စသည်တို့ကို ညဘက်တပြုံတပင်စုပြီး အားသွင်းနိုင်ဖို့၊ electronic ဆိုင်များအတွက် ရောင်းမည့်ပစ္စည်းများစွာကို Device ၈ခုစလုံးအတွက် နေရာကျယ်မယူပဲ တစုတဝေးတည်း အားသွင်းထားနိုင်ဖို့ စနစ်တကျ သပ်သပ်ရပ်ရပ် အားသွင်းစက်မျိုး ရှာဖွေနေပါသလား ?
YC-CDA19A USB charger
တန်ဖိုး ၃၀၀၀၀ကျပ် (30000ks)
USB ၈ပေါက်ကို 5.2Vဖြင့် အားသွင်းပေးနိုင်ပြီး Blue Screen Display တွင် အားသွင်းထားသည့်အပေါက်၊ အားသွင်းမှုအခြေအနေတို့ကို Digital ဖြင့် ဖော်ပြပေးပါသည်။ လိုအပ်သည့် အမ်ပီယာကိုသာ တွက်ဆတွန်းပို့ပေးပါသည်။ ဘတ္ထရီသေးသည့် Device များတွင် 0.5A လောက်သာ သွင်းပေးပြီး iPad ကဲ့သို့ ဘတ္ထရီကြီးသော Device များတွင် 2.6A အထိ သွင်းပေးသောကြောင့် ဘတ္ထရီဖောင်းမှာ ပျက်စီးမှာကို စိုးရိမ်ဖို့မလိုတော့ပါ။
မီးအားနည်းလျှင် 100V , မီးအားမြင့်လာလျှင် 240V အထိ ခံနိုင်ရည်ရှိအောင် တပြေးညီ ထိန်းညှိပေးသည့် စနစ်ပါရှိပြီး အားပြည့်လျှင် အလိုအလျောက် ဖြတ်တောက်ပေးသည့်စနစ်လည်း ပါရှိပါသည်။
CE/FCC/UL/CCC/ROHS certificate များ ပါရှိပြီး စိတ်ချရသော အရည်အသွေးမြင့် လျှပ်စစ်ထုတ်ကုန်ဖြစ်ပါသည်။ ဖွင့်လှပ်ပြုပြင်စရာမလိုအောင် ကောင်းမွန်သည့် ဖွဲ့စည်းမှုကြောင့် စကူပေါက်၊ ဆော့ကတ်ပေါက် အပျောက်ပြုလုပ်ထားပြီး အပူဒဏ်ခံနိုင်သည့် အကောင်းစား PVC plastic ဖြင့် သပ်ရပ်စွာ ထုတ်လုပ်ထားပါသည်။
မှတ်ချက်။ ။ ၁၅၀၀ကျပ်တန် ၂၀၀၀ကျပ်တန် အပေါစား အားသွင်းတုံးများမှာ အမ်ပီယာထိန်းညှိစနစ် မပါသောကြောင့် ဖုန်းအားလုံးနှင့် ကိုက်ညီဖို့ မလွယ်ပါ။ မကိုက်ညီလျှင် တခါတရံ အားသွင်းရင်း ရှိရင်းစွဲအားပင် လျော့သွားသည်ကို ကြုံဖူးကြပါလိမ့်မည်။ ၂၀၀၀တန် ၈ခု (2000x8=16000) ဝယ်သုံးမည့်အစား Device ၈ခု တပြိုင်နက်အားသွင်းနိုင်မည့် YC-CDA19A USB charger ကို ဝယ်သုံးခြင်းက ၇၀၀၀ကျပ် ပိုကုန်သွားပေမယ့် ဘတ္ထရီသက်တမ်းပိုကြာရှည်ခံစေခြင်း၊ ဘေးအန္တရာယ်ကင်းခြင်း၊ စနစ်တကျ မြန်မြန်အားသွင်းနိုင်ခြင်း၊ ရိုးရိုး အားသွင်းတုံးနှင့် သွင်းမရသော နုနယ်သည့် Spy Camera တို့ကို အားသွင်းပေးနိုင်ခြင်း စသည့်အကျိုးကျေးဇူးများကား အဆများစွာ ပိုသာပါသည်။
1.Support 8-ports USB devices charging simultaneously,showing real time current,each port intelligently detects your devices' needs to deliver the optimal current.(Max.2.1A per port or 8A overall)
2.Multiple safety system: Build-in overheat, overcharge, overcurrent, overload, surge, leakage, lightning, short circuit protection, greatly extending the battery life of devices and keeping you and your devices safe.
3.fire-resistant and high temperature-resistan ABS material with UV oil processing technic .
4.US Plug/EU Plug/UK Plug is available .
5.Support all kinds of 5V output devices with USB interface like iPhone.Samsung.Xiaomi.Huawei.tablet PC,iPad mini23 4,camera.
6.Conforms to CE/FCC/UL/CCC/ROHS certificate .
7.Ideal for home,office,trave and other indoor using.
1 * 8 Ports USB Charger with Retail Box
🚌 ဆက်သွယ်မှာယူပါက ရန်ကုန် မြို့တွင်း ကိုdelivery အိမ်အရောက်ပို့စနစ်ဖြင့် ပို့ဆောင်ပေး ပါသည်။
🏦 အခြားနယ်များမှ မှာယူလျှင် ဘဏ်မှ ငွေကြိုလွှဲရပြီး ငွေလက်ခံရရှိမှသာ ကားဂိတ်အရောက် ပို့ဆောင်ပေးပါ သည်။
Or chat box